ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်ဆိုတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေက မြနှင်းရည်လွင်…. – Sport Gaber
ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်ဆိုတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေက မြနှင်းရည်လွင်….
MRTV-4ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီး ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို အခိုင်အမာရရှိထားသူကတော့ မင်းသမီးချောမြနှင်းရည်လွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်..။ မြနှင်းရည်လွင်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ အစပိုင်းကတည်းက ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အပင်ပန်းခံကာ လမ်းပေါ်ထွက်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်ကာ အားလုံးနဲ့အတူ ရပ်တည်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅(က) နဲ့ အမှုဖွင့် အရေးယူခံထားရတာဖြစ်ပြီးရှောင်တိမ်းနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ နေရာမှာ နေထိုင်နေပြီးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွက် ကျရာအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်သရုပ်ဆောင်မြနှင်းရည်လွင်ကတော့လွှတ်မြောက်နယ်​မြေသို့ရောက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်၊ သူမအနေနဲ့ လက်ရှိ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရကြောင်းသိရပါတယ်၊ ပြည်သူတွေနဲ့ တသားတည်းရပ်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် မြနှင်းရည်လွင် အမြန်ဆုံး ပျောက်ကင်းပါစေလို့ စုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်နော် ပရိသတ်တွေ လည်း စုတောင်းပေးကြပါအုန်းနော်။
Previous Article သင်တန်းတွေပီးလို့နူတ်ဆက်ခွဲခွါရချိန်ရောက်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ PDF လူငယ်တွေရဲ့ဘဝ
Next Article မန်ယူအသင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို စပယ်ရှယ်ပလန်နဲ့ ထိထိမိမိ ဒဲ့ဆော်လိုက်တဲ့ – ဂယ်ရီနဗီးလ်